Tahriibayaasha oo Wali ku sii qul qulaya dalka Yemen xilli lagu jiro Bad xiran. [Akhris …] – Radio Daljir
Tahriibayaasha oo Wali ku sii qul qulaya dalka Yemen xilli lagu jiro Bad xiran. [Akhris …]
Sanca, June 28- Iyada oo lagu guda jiro xilligii bad xiranka ayaa haddana wali waxaa sii gaaraya xeryaha qaxootiga ee dalka Yemen dad isugu jira Soomaali iyo Itoobiyaan ku waas oo ka tahriibey xeebaha dalka Yemen.
Warkaan oo ay shaacisey Wakaaladda Wararka ee dalka Yemen ee SABA waxaa ay sidoo kale ay gaartey waxyeellada iyo dhibaatooyinka ay la kulmaan dadka nolol doonka ah mid ka sii badata intii horey u jiri jirtey maaddaama dadka ay ku galaan doonyo yar yar oo gabow ah.
Guddiga Caalamiga Caalamiga ah ee qaxootiga u qaabilsan QM ayaa waxaa ay sheegeen in sanadkaan uu ka midyahay sanaddadii ugu badnaa ee ay qaxooti farabadani ay soo galaan dalka Yemen, waxaana wali sii socda Tahriibayaasha ku sii qul qulaya dalkaasi.
Horey ayaa waxaa u jirtey xaalad nolol xumo oo ay ku sugnaayeen dadka Qaxootiga ah eek u dhaqan dalkaasi Yemen, iyada oo ay dajinta dadkaasi ay ka qeyb qaadato hay?adda UNHCR halka dawladda Yemenna ay sheegtey in ay dhinaca nabad gelyada ay gacan ka siineyso qaxootigaasi.
Dadka Tahriibayaasha ayaa waxaa ay kala kulmaan dhibaato inta ay ku guda jiraan safarka dhinaca badda ah ee ay ku gaaraan dalka Yemen, kooxaha dadka Tahriibaya ayaa waxaa ay ku khasbaan in ay ka daataan dadka Tahriibayaasha ah doonyaha ay la socdaan markii ay la kulmaan dhibaatooyin dhinaca badda ama Farsamada.
Waxaana falalkaan horey u cambaareeyey hay?adaha Xuquuqul Insaanka iyo kuwa QM waxaana wali sii soconaya falalka Tahriibinta dadka.